စိတ်ကြွရောဂါ | USAHello | USAHello
သငျသညျစိတျထဲမှာပြင်းထန်အတက်အကျရှိသည့်အခါ bipolar ရောဂါ. သူတို့ကအရမ်းဝမ်းနည်းပြီးအလွန်ပျော်ရွှင်အခါအစွန်းရောက်စိတ်ဓါတ်များ၏ vagaries ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာခက်ခဲတိတ်ဆိတ်တဲ့ဘဝနှင့်အဖွဲ့အစည်းကိုရဖို့စေသည်.
စိတ်ကြွရောဂါရှိသည်သောပြည်သူ့ခံစားချက်ပြောင်းလဲမှုများတွေအများကြီးရှိသည်. ဥပမာအားဖြင့်, ငါနှစ်လအလွန်ဝမ်းနည်းခံစားရသူတို့ကိုအလုပ်လုပ်ဘို့ခက်ခဲသည်. ထိုအခါပျော်ရွှင်ခံစားရသူတို့စွမ်းအင်တွေအများကြီးရှိသည်ကြောင့်အမှုအရာတွေအများကြီးလုပ်နေစတင်ရန်.
ဤသူသည်သင်တို့မှဖြစ်ပျက်လျှင်, သင်စိတ်ကြွရောဂါရှိစေခြင်းငှါ, သင်ကူညီပေးရန်နည်းလမ်းများနှင့် ပတ်သက်. သင်၏ဆရာဝန်စကားပြောနိုင်ပါတယ်.
သငျသညျစိတ်ကြွရောဂါရှိပါကသင်သည်အလွန်စိတ်ဓာတ်ကျခံစားရနိုင်ပါတယ်. စီးပွားပျက်ကပ်သင်ကအရမ်းဝမ်းနည်းခံစားရတဲ့အခါသင်ပုံမှန်အမှုအရာမပွုနိုငျဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျစိတျဓာတျကြသောအခါသင်တို့ကိုခံစားရသို့မဟုတ်ခံစားရနိုငျသောအမှုအရာအချို့သည်:
အလွန်အကျွံ Sleeping သို့မဟုတ်အိပ်လို့မရဘူး
သငျသညျစိတ်ကြွရောဂါခံစားနေရပါလျှင်, Manic ဖြစ်စဉ်များကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်. Manic ဖြစ်စဉ်များကိုသင်ပျော်ရွှင်ခံစားရနှင့်စွမ်းအင်တွေအများကြီးရှိသည်အခါ,. သင်တစ်ဦးသည် loop Mania ကိုရှိတဲ့အခါသင်ခံစားရပါသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံကိုနိုငျသောအမှုအရာအချို့သည်:
သငျသညျ Self-လေးစားမှုဖောင်းပါပြီ. အဆိုပါ Self-လေးစားမှုသင်ပုံမှန်အတိုင်းထက်ပိုကောင်းနှင့်ပိုပြီးအရေးကြီးလှသည်ထင်သည့်အခါအဆမတန်ကြီးမားဖြစ်ပါသည်. ဥပမာအားဖြင့်, သင်ကထိခိုက်စေမနိုင်ဒါကြောင့်သင်လူစွမ်းကောင်းင်ထင်. ဒါမှမဟုတ်သင်ကအရမ်းပါရမီနှင့်ကျော်ကြားသောဖြစ်ကြသည်ထင်.
သငျသညျအကြီးအထင်ယောင်ထင်မှားရှိ. Grandiose ဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့ဆိုလိုတယ်. သင်ကကောင်းစွာမဖြစ်သည့်အခါတစ်ခုခုကိုမှန်ကန်သည်ဟုမထင်ရသောအခါထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ပြီး. သင်အလွန်အားကောင်းတဲ့နှင့်အရေးကြီးလှသည်ထင်သည့်အခါကကိုထိခိုက်လို့မရဘူးဒါကြောင့်သင်ကအကြီးအထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်နိုင်ပါတယ်. သင်စိတ်ထိခိုက်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးထင်လျှင်, သင်အန္တရာယ်အမှုအရာသည်သဘာဝမကြဘူး.
သင်စိတ်ကြွရောဂါရှိသည်ဆုံးဖြတ်ရန်ဆရာဝန်များအတွက် Manic တစ်စိတ်ပျက်စရာဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲရှိသည်ဖို့လိုအပ်. စိတ်ကြွရောဂါရှိသည်သောလူအတော်များများလည်းစိတ်ကြွရောဂါရှိပြီးသူတစ်ဦးဆွေမျိုးများ.